အန်းဒရွိုက်သည် launcher | အန်းဒရွိုက် launcher | Apps ကပ APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers
Category: - Launcher
launchers Apps ကပ APK ကို
အဆိုပါ launcher အခြေခံအားဖြင့်သင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ် user interface ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်အလွယ်တကူသည် home screen ကို customize ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်မိုဘိုင်း apps များနှင့် Android ပေါ်မှာ run သော Device များပေါ်တွင်တခြားအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအပြောဟာ android launchers သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်အိမ်မျက်နှာပြင်၏ခြုံငုံကြည့်တက်တဲ့ကိုယ်ရေးလက်ထောက်များနှင့်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းပြီးသား built-in launcher နှင့်တကွကြွလာ။ သို့သော်အများအပြားရှိပါတယ် launchers ထွက်အဲဒီမှာ Google Play စတိုးတွင်။ အန်းဒရွိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသူက open source ဖြစ်ပြီးသည်နှင့်သင်အပြည့်အဝက customize နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သင်တစ်ဦးသည် iPhone ကိုအသုံးပြုနေလျှင်, သင် Apple ကပေးထားကြောင်းကို iOS ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုမပြောင်းနိုင်ပါ။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, Android သုံးစွဲသူများလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ device ကိုရဲ့ home screen ကနဲ့ app အံဆွဲတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအယူခံဝင်ထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်ရုံသင့်ရဲ့ home screen ကိုအစားထိုးသော launcher, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကို၏ဆော့ဖ်ဝဲ၏ features နဲ့မဆိုအဓိကအပြောင်းအလဲများမရှိဘဲခြုံငုံဒီဇိုင်း tweaks ။
အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုမှုကို Android Launcher?
သငျသညျလုံးဝသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် hotkey သို့မဟုတ် home screen ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သုံးစွဲနိုင်ဖြစ်နိုင်သည့်, အပင်မမျက်နှာပြင်ကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ Widgets နဲ့ဝေါလ်ပေပါကိုတွေ့ကြသည်နှင့်သင်အသုံးများ apps များရန်သင့် shortcuts တွေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။
အန်းဒရွိုက် launchers Widgets တွေ, အိုင်ကွန်ထုပ်နှင့်နောက်ခံပုံများပေါင်းထည့်ဖို့အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ ဤအ apps များနှင့်အတူ, သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောပိုပြီးပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်အိမ်တွင်းဖန်သားပြင်တွေ့ဆုံရန်နိုငျသော apps များ၏နံပါတ်အဖြစ်ရှိပြီးသားဒီဇိုင်းစစ်မှန်တဲ့အလားအလာ, သော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိရိယာ၏ခြုံငုံကြည့်နဲ့ခံစားဖို့နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲများကိုစေနိုင်သည်။ နောက်ခံပုံများနှင့် Widgets တွေနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ကစားများနှင့်အိုင်ကွန်အထုပ်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ပိုပြီးပျော်စရာထည့်ပါ။
ငါက Android Launcher ကြိုးစားပါသငျ့သလော
အစပိုင်းတွင်ပြုလုပ် launchers သုံးစွဲဖို့ရှုတ်ထွေးစေနိုင်သည်သူတို့ပထမဦးဆုံးမှာကောင်းသောဟာ android အတွေ့အကြုံကိုမပေးနိုငျသညျ။ သူတို့သည်သင်၏ဟောင်းဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ပျင်းစရာစတော့ရှယ်ယာကို Android features တွေအားအသစ်သောအသက်နှင့်တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်သို့သော်သင်ဆဲန်းကျင်ဆော့ကစားသင့်ပါတယ်။
Launcher 2020 အသစ်အခင်းအကျင်းများ ...
Android ™အတွက် Cool Q Launcher ...
Cool Mi Launcher - စီစီ ...
စမတ် Launcher (အကောင်းဆုံးအခမဲ့ ...
Q 10.0 အတွက် Q Launcher ...
X Launcher - အေး ...
launcher က Galaxy S10 စတိုင်
launcher ကို iOS 13
နယူးခရမ်းရောင်ကြည်လင်နှလုံး APUS ...
Fancy Launcher ကို 2019 -...
Computer ကိုဖွင့်တင်ပေး -Best ...
Mac OS နဲ့စတိုင်များအတွက် launcher
Oppo တင်ပေးသူ - အဘို့အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ ...
အစာရှောင်ခြင်း Locker: နှစ်ချက်ပုတ် Lock ကို ...
LightLaunch အလင်း 3D တင်ပေးသူ
ကွန်ပျူတာများအတွက်ဝင်း7အဓိကအကြောင်းအရာ ...
ဦးဝင်း 10 များအတွက်ကွန်ပျူတာဖွင့်တင်
Launcher ကို S ကို GO - 3D ...
X ကိုဖွင့်တင်နယူး: OS12 နှင့်အတူ ...
CPL (စိတ်ကြိုက် Pixel ...
launcher ကို iOS 12
X ကိုဖွင့်တင် Lite ကို: OS11 နှင့်အတူ ...
Launcher ကို IN အချစ် - ...
ဦး Launcher ကို Lite ကို - အခမဲ့တိုက်ရိုက် ...
ME တင်ပေးသူ - Theme ...
123 ...7နောက်တစ်ခု